Dani Alves oo ay halis soo wajahday kadib ka tagistii uu ka tagay kooxda Barcelona xilli uu ku biiray kooxda Juventus. | Hoyga Barbaarta Somalistars
Home » Ciyaaraha » Dani Alves oo ay halis soo wajahday kadib ka tagistii uu ka tagay kooxda Barcelona xilli uu ku biiray kooxda Juventus.
Dani Alves oo ay halis soo wajahday kadib ka tagistii uu ka tagay kooxda Barcelona xilli uu ku biiray kooxda Juventus.
Waxaa Qoray: admin /////////// Taariikh: 30-06-16 1:35 PM Bayaan rasmi ah oo soo baxay maanta oo khamiis ah ayaa qorayo in xidigii hore ee kooxda Barcelona ahna laacib hada ka tirsan Juventus Dani Alves lagu leeyahay lacago canshuur ah oo lagu qiyaasay 1.3 Milyan oo Euro.
Magaca Dani ayaa kasoo muuqday liis ay soo saareen waaxda canshuuraadka dalka Spain, liiska lasoo saaray waxaa lagu xusay dhamaan magacyada dadka lagu leeyahay lacagaha kor u dhaafay 1 Milyan.
5768 shaqsi oo magac ku leh dalka Spain ayaa sidoo kale liiskaas lagu xusay waxaana la sheegay in dhamaan dadkan lagu leeyahay lacago canshuuro oo xoog badan.
Dani waxaa ku wehliye deyntan Dani Betroza oo lagu leeyahay 7.85 Milyan oo Euro sidoo kale Gabriel Milito oo ciyaaraha ka fariistay ayaa isagana lagu soo dalacay 1.83, sidoo kale waxaa ku jira oo kaso muuqday madaxweynihii hore ee Real Madrid Laurence oo lagu leeyahay isagana 1.36 Milyan oo Euro.
Ugu dambeyn waxaa xusid mudan in sidoo kale liiskan ay kasoo muuqdeen kooxo lagu leeyahay lacago waxaana ka mid kooxahaas lagacaha lagu leeyahay kooxda Elche oo lagu leeyahay 9.46 Milyan oo Euro, halka kooxda Racing Standard lagu leeyahay iyadana 9.76 Milyan oo Euro.